आकस्मिक झोला कसरी तयार पार्न सकिन्छ? – नेपाल बाढी उत्थानशीलता पोर्टल
आकस्मिक झोला कसरी तयार पार्न सकिन्छ?
विपद्को समयमा र विपद्को पश्चात आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु आकस्मिक झोलामा भण्डारण गरिनुपर्दछ । विपद् पूर्वतयारीको प्रमुख कार्यको रुपमा आकस्मिक झोलाको तयारी पनि पर्दछ । आकस्मिक झोलामा कम्तिमा तीन दिनको लागी खाना र पानीका साथै प्राथमिक उपचार सामाग्री, टर्च, रेडियो जस्ता अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु समावेश गरिनुपर्दछ । आकास्मिक झोला तयार गर्न तल दिइएको सामाग्रीहरु सहयोगी हुनसक्छन ।